ARC Real estate services Thin Thin Htet Aung
+959442725957 / +959795367234
Our Local Project
Post Your Properties
Archive for Author:
Home Archive for Author: thinn
Bangkok-area land prices leap
by Thin Thin Htet Aung
Rising prices for land near future mass transit lines and in neighbouring provinces drove the average land price in Greater Bangkok toa32.3% year-on-year increase in the second quarter of 2018. The Real Estate Information Center (REIC) on Friday reported the top five locations where prices of...
Myanmar’s Industrial Zone News
စက်မှုဇုန်မြေတွေ အရောင်းအငှား ပြန်လိုက်လာ လက်ရှိမှာ စက်မှုဇုန်မြေတွေ နေရာအလိုက် အရောင်း၊အငှား ပြန်လိုက်လာတယ်လို့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တွေဆီက သိရပါတယ်။ အရှေ့ဒဂုံ၊သန်လျင်၊မင်္ဂလာဒုံ၊ ပဲခူးစက်မှု ဇုန်တွေမှာ လိုအပ်ချက်အရ အရောင်း၊ အငှား ဖြစ်နေပါတယ်။ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ကတော့ ရှေးကျတဲ့ စက်မှုဇုန်ဖြစ်ပြီး ရောင်းမယ့် အကွက်တွေ လည်း နည်းပါးတာကြောင့် အနည်းငယ်အေးနေပါတယ်။ “ကျွန်မတို့စက်မှုဇုန် အရောင်း၊ အငှားလုပ်တာ ၁၂ လပိုင်းမှ စလုပ် ဖြစ်တာ၊အမေးလေးတွေရှိတော့ ပြန်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တာပါ၊စလုပ်တဲ့အချိန်ကတည်းကဇုန်အလိုက်ရောင်း၊ဝယ်၊ငှားဖြစ်ပါတယ်”လို့ ရွှေဥဒေါင်းမင်း အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်မှ Operation Manager မသင်းသင်းကပြောပါတယ်။ အငှားဈေးကွက်မှာ အကွက်အကျယ်၊ ဂိုဒေါင်ပါဝင်မှုတွေ၊ ခြံခတ်ထားတဲ့ဇုန်၊ facilities တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ဧကအငှားဈေးနှုန်းတွေက ကျပ်သိန်းဆယ်ဂဏန်းကနေ ရာဂဏန်းအထိ...
Biggest Branded Wholesale Mall In Myanmar (Ga Mone Pwint Wholesale Mall)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးနှင့်ခေတ်အမှီဆုံး အဆင့်မြင့်လက္ကားဈေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂမုန်းပွင့်လက္ကားဈေးကြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးနှင့်ခေတ်အမှီဆုံး အဆင့်မြင့်လက္ကားဈေးကြီးဖြစ်​လာမည့်​ Gamone Pwint Wholesale Mallတွင်​ ဆိုင်​ခန်းများကို ​ပေါက်​​ဈေးထက်​များစွာသက်​သာ​သော ​ဈေးနှုန်းများဖြင့်​ ​အတိုးမဲ့ အရစ်​ကျ (သို့) ဆိုင်​ခန်းငှါးခ​လောက်​ပဲ လစဉ်​​ပေးပြီး အသက်​သာဆုံးနဲ့ အတန်​ဆုံး​ရောင်းချ​ပေး​နေပါပြီ ယနေ့ခေတ်မှာ လက်​ကား​ဈေးရုံ​တွေ ​ခေတ်​မမှီလို့ ကုန်​တင်​ကုန်​ချ အဆင်​မ​ပြေတာ​တွေ၊ ဂို​ဒေါင်​နဲ့ ​ဝေးပြီး အဆင်​မ​ပြေတာ၊ ဓာတ်​​လှေကားနဲ့ carparking အဆင်​မ​ပြေတာ​တွေ၊ ​လျှောက်​လမ်းကျဉ်းတာ aircon မ​ကောင်းတာ၊ သန့်​ရှင်း​ရေးအားနည်းတာ၊ toilet အဆင်​မ​ပြေတာ၊ မီး​ဘေးနဲ့ ဝါယာ​ရှော့ safetyအားနည်းတာ​ အစရှိတဲ့ ​ကြောင်းအမျိုးမျိုး​တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ့် Gamone Pwint wholesale Mallဟာဆိုရင်......
စုပေါင်းပိုင်အိမ်ရာဆောက်လုပ်ခွင့် လိုင်စင် ကုမ္ပဏီ ၃၀ ကျော်ကိုထုတ်ပေး
စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်ကို ထိပ်တန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဥပဒေ ထွက်ပြီးတဲ့နောက် ဧပြီ ၆ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ Pan Pacific ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ တည်ထောင်သူ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးအပ်ပွဲမှာ ကုမ္ပဏီ ၃ဝ ခုကို စုပေါင်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးလိုက်တာပါ။ စုပေါင်းပိုင်အိမ်ရာ ဥပဒေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလအတွင်းက ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ဥပဒေအရ ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေထံရောင်းချနိုင်ခွင့်ရှိသလို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ အကျိုးတူ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုရောင်းချရာမှာ အဆောက်အဦးတွေကို နိုင်ငံသား ခြောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရောင်းချနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်...
Famous Bangkok Hospitals Among Myanmar People
​ဆေးကုဖို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​ medical check-up လုပ်​ဖို့ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ ​​ဆေးရုံ​ဆေးခန်းပြဖို့ဆိုရင်​​ ကုန်​ကျစရိတ်​လည်းသက်​သာပြီး နိုင်​ငံတကာ အဆင့်​မှီ ​ဆေးဝါးကိရိယာ​တွေနဲ့ ကုသ​ပေးတဲ့ Bangkok က ​ဆေးရုံ​တွေကို အများဆုံး သွား​ရောက်​ကုသ​နေကြပါပြီ ယနေ့ခေတ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆေးပညာဟာဆိုရင် အရမ်းတိုးတက်ခေတ်မှီလာတာကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေသာမက အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကပါ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆေးပညာလောကကို ယုံကြည်ကိုးစားလာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆေးဥပဒေကလည်း မည့်သည့်လူနာကိုမဆို အပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးထားတာကြောင့်လည်း ထိုင်းကိုသွားရောက်ဆေးကုသတဲ့သူတွေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် နှစ်စဉ်တိုးတက်မြင့်မားလာပါတယ် ယနေ့ခေတ်မှာ မြန်မာတွေအများစု သွားရောက်ဆေးစစ်ကြတဲ့ နာမည်ကြီးဘန်ကောက်ဆေးရုံတွေကတော့ ➕ #Bumrungrad_International_Hospital ➕ #Bangkok_International_Hospital ➕ #Samitivej_Sukhumvit_Hospital ➕ #Samitivej_Srinakarin_Children's_Hospital ➕ #Phayathai_Hospital ( Branch အဖြစ် Phayathai 1,...
Buying Processes Of Bangkok Condos
လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Step-4 ခုတည်းဖြင့် ထိုင်းမှာcondo ဝယ်ကြည့်ရအောင် Customerများရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးနေသော ကျွန်ုပ်တို့ ARC ဟာဆိုရင်... ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Sansiriနဲ့လက်တွဲပြီး ထိုင်းမှာcondo ဝယ်ယူမဲ့ လူကြီးမင်းတွေအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ် ထိုင်းမှာ condominiumတစ်ခုဝယ်ယူဖို့ဆိုတာ မခက်ခဲပါဘူးနော် Step 4ခုကိုပဲဖြတ်ကျော်ရမှာပါ Step 1️ မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခန်းကိုရွေးချယ်ပြီး booking feesအနေနဲ့100,000 THB ကိုပေးချေရပာမယ်။ Booking feesပေးချေရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်... Via credit card ဒါမှမဟုတ် Overseas currency နဲ့ဆိုပြီး ပေးချေလို့ရပါတယ် Step 2️ Booking fees ပေးပြီးရင်တော့ contract feesပေးချေဖို့ အချိန်၁၄ရက်ရရှိမှာပါ။...
Emerald Bay Eco Smart City
သာကေတရှိ Emerald Bay Eco Smart City ကို စုပေါင်းပိုင် အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ် သာကေတမြို့နယ် ရှုခင်းသာရပ်ကွက်ရှိ ၁၇ ဧက ကျယ်ဝန်း သည့် Emerald Bay အဆောက်အအုံကို စုပေါင်းပိုင် အဆောက် အအုံအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း Yangon Golden Paragon Investment ကုမ္ပဏီ ကဧပြီ ၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ အဆိုပါ အဆောက်အအုံကို Emerald Bay Eco Smart City အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးနှစ် ၆၀ ဂရန် ဖြင့် ၃၂ ထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဖြစ်သည်ဟုကုမ္ပဏီက ဆိုသည်။ စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သည့်...
Building Completion Certificate BCC
ကွန်​ဒိုတိုက်ခန်းမ၀ယ်ခင် သိထားသင့်တဲ့ ဆောက်လုပ်ခွင့် (ဘုတ်စိမ်း) စာရွက်နဲ့ ဘီစီစီ (BCC) စာရွက် လူတော်တော်များများ တိုက်ခန်းဝယ်ရင် ဘီစီစီပါလား မေးတတ်ကြ ပါတယ်..။ ဘီစီစီစာရွက်လည်း ပေးလိုက်ရော ဘီစီစီ စာရွက်လို့ မသိကြပြန်ပါဘူး..။ ဘီစီစီစာရွက်ကို ဘီစီစီ စာရွက်ပါလို့ ပေးပေမယ့် ဘီစီစီစာရွက်လို့ မသိကြတဲ့ သူတွေကြောင့်လည်း အကျိူးဆောင်၊ ပွဲစားများ စိတ်ညစ်ရပါတယ်..။ ဘီစီစီကို လူနေထိုင်ခွင့်လို့ လူတွေအလွယ်ပြောပါတယ်..။အဲဒီတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ လူနေထိုင်ခွင့်လို့ ပါနေလိမ့်မယ်လို့ မသိစိတ်က ထင်မှတ်ထားကြပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဘီစီစီ(BCC) ဆိုတာ Building Completion Certificate ဆိုတဲ့ စည်ပင်ဌာနကထုတ်ပေးတဲ့ အဆောက်အဦးပြီးစီးကြောင်း အသိ အမှတ်ပြုလွှာကို ခေါ်တာပါ..။ အဆောက်အဦးပြီးစီးကြောင်း...
Beautiful 1BR Condo in Yankin Township
Beautiful 1BR Condo
Copyright © 2014 Real Home Theme All Rights Reserved | Design Themes